Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii balaadhnaa ee uu hogaaminayay ayaa maanta ka soo ambabaxaya magaalada berbera waxaanay ku soo jeedaan magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland.
Madaxweynaha ayaa ku jiray safar qaatay muddo 2 todobaad in ku siman, madaxweynuhu wuxuu maray dhamaan dalka intiisa badan iyadoo uu gaadhay madaxweyne biixi jiida hore ee dagaalka oo ugu muhiimsanayd meelaha lagu xasuusan doono iyo waliba magaalada ceerigaabo.
Madaxweyne biixi ayaa soo dhaweyn wacdaro wadata lagaga soo dhaweynaya magaalada hargeysa, waxaana lagu wadaa in madaxweyne biixi uu sameeyo isku shaandhayn culus oo maadaama oo sanadkii u buuxsamay.
Ma cadda in Muuse Biixi wax ka bedelayo boosaska muhiimka ah ee ay beesha madaxweynuhu ku fadhido, si kasta ha ahaatee bulshada ayaa 80% kaga soo horjeeda madaxweyne biixi xukuumaddiisa dhinaca ka raran ee u badan beesha uu ka soo jeedo.
Haddii ay dhacdo in uu bedelo boosaskan lagu bartilmaameedsanayo xukuumaddiisa waxaa uu ku heli karaa guul iyo taageero laxaad leh oo uga timaada dhinacyada mucaaridka iyo bulshada qeybaheeda kala d